Naya Post Nepal | गायिका टिका सानुले अलिफलाई घर ज्वाई बस्नुपर्छ भनेपछि यस्तो सम्म भयो ? – भिडियो हेर्नुस
गायिका टिका सानुले अलिफलाई घर ज्वाई बस्नुपर्छ भनेपछि यस्तो सम्म भयो ? – भिडियो हेर्नुस
प्रत्यक्ष दोहोरी मार्फत आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल लोकदोहोरी गायिका हुन् – टीका सानु । आँखामा आँखा जुधाएर जस्तालाई त्यस्तै दोहोरी सबाल जवाफ गर्न सक्ने क्षमता नै उनको प्रशंसाको बलियो पक्ष बन्यो ।सामाजिक संजालमा उनलाई रुचाउने समर्थकहरुको सङ्ख्या दिनानु दिन बढ्दो छ । युट्युबमा उनका दर्जनौं प्रत्यक्ष दोहोरीहरु सुन्न र हेर्न पाइन्छ । औपचारिक रुपमा रेकर्ड भएका गीतहरुको सङ्ख्या पनि दर्जनौं पुगिसकेको छ ।
इन्द्रेणी कार्यक्रममा सहभागी भएर गरेका धेरै परोपकारी कार्यले उनलाई लोकप्रिय मात्र बनाएन कलाकारका साथै समाजसेवीको रुपमा समेत स्थापित गरिदियो । उनको सरल जीवनशैली, दयालु मन, निस्वार्थी सोच र अरुको दुखमा आफु मर्माहत हुने जस्ता गुणहरुले नै उनी करौडौ दर्शक श्रोताको ढुकढुकी बन्न पुगेकी हुन् ।
नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एकपछी अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत संगीत बजारमा आइरहेका छन् । तेस्तै अर्का भाईरल गायक हुन अलिफ खान भन्ने बित्तिकै तपाइँ हामी पछिल्लो समय धेरैले चिनेको नाम अनि अनुहारनै हो। जसको पछिल्लो समय धेरै गितहरु संगै लाइभ दोहोरी गितहरु समेत हेर्दै आउनु भयको छ। मिठो अनि सुमधुर स्वरका धनि अलिफ खान एक मुस्लिम समुदायमा जन्मिय अनि हुर्कियका व्यक्ति हुन।
धेरै काममा लागेपनि कुनैपनि काममा सफलता-पाउन नसक्दा कुनै दिन बिदेश जाम कि भनेर बिदेशीन लागेका नेपालि युवा थिय।बिदेश जानकी लागी पनि उनले केहि पैसा फ़सायका-समेत थिय, यो कुरा हामि संगकै अन्तर्वार्ताका क्रममा उनि आफैले भनेका हुन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय उनि मुस्लिम समुदायमा नाच-गान भनेको अलि परकै कुरा भयपनी उनि करीब एक दशक देखी बाजाहरु बजाउने साथै केहि बर्ष देखी उनले गीतको संगीत संयोजन समेत गर्दै आयका थिय तर उनको नाम एउटा कोठा भित्रमात्र रहन्थ्यो। कसैले छिन्न सकेका थियनन उनको कला अनि गालालाई।
अलिफ खान भन्ने बित्तिकै तपाइँ हामी पछिल्लो समय धेरैले चिनेको नाम अनि अनुहारनै हो। जसको पछिल्लो समय धेरै गितहरु संगै लाइभ दोहोरी गितहरु समेत हेर्दै आउनु भयको छ। मिठो अनि सुमधुर स्वरका धनि अलिफ खान एक मुस्लिम समुदायमा जन्मिय अनि हुर्कियका व्यक्ति हुन। धेरै काममा लागेपनि कुनैपनि काममा सफलता-पाउन नसक्दा कुनै दिन बिदेश जाम कि भनेर बिदेशीन लागेका नेपालि युवा थिय।
बिदेश जानकी लागी पनि उनले केहि पैसा फ़सायका-समेत थिय, यो कुरा हामि संगकै अन्तर्वार्ताका क्रममा उनि आफैले भनेका हुन्। त्यस्तै पछिल्लो समय उनि मुस्लिम समुदायमा नाच-गान भनेको अलि परकै कुरा भयपनी उनि करीब एक दशक देखी बाजाहरु बजाउने साथै केहि बर्ष देखी उनले गीतको संगीत संयोजन समेत गर्दै आयका थिय तर उनको नाम एउटा कोठा भित्रमात्र रहन्थ्यो। कसैले छिन्न सकेका थियनन उनको कला अनि गालालाई।
पछिल्लो समय मिडियाहरुको यस्ता लुकेर-बसेका प्रतिभाहरु खोज्दै जाने क्रममा अलिफ खानलाई समेत भेटाउन पुगेका थियौं। त्यसपछि उनको कला र गलाले सारा विश्वभर रहेका नेपालि हरुको मन-छुन पुग्यो र सबैका सर्वप्रिय गायक बनेर चिनिन सफल भयका हुन्। यसभन्दा अगाडि पनि उनले केहि गितहरु नगायका भने पक्कै होइनन।
तर अरु धेरै कामहरुमा जस्तै गायन-क्षत्रमा समेत उनि अगाडि बढ्न नसक्दा साच्चै-उनि हार-पक्कै खायाका थिय। एकपछि अर्को चर्चा-अनि परिचर्चाहरु बजारमा आउन थालेपछि उनको गितहरु पनि हिट हुदै गय भने सांगीतिक बजारमा पनि उनको गाग अझै बढेर गयको थियो। त्यसपछि एक मुस्लिम समुदायमा हुर्कियको युवा भयपनी उनले गित संगीतको बजारमा सबैसामु उनको नाम,काम, कला र गलाले उनि एउटा सफल गायक बनेर सबैमाझ चिनिन सफल भयका हुन्।
भनिन्छ नि जिन्दगीमा जति सुकै सबै कुरामा असफलता भयपनी तर हार-भने कहिल्य नखानु भनेर त्यस्तै भयो अलिफको समय पनि परीबर्तन हुदै गयो र सबै दर्शकहरुको हाइ-हाइ पाउन सफल-भयका थिय। अब आउनुस गायिका टिका सानु र अलिफ खान ले गाएको दोहोरी गीत हेरौ
२०७८ माघ २२, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 152 Views